Handball – CJSOI 2016 : hiady lohany amin’i La Réunion i Madagasikara | NewsMada
Handball – CJSOI 2016 : hiady lohany amin’i La Réunion i Madagasikara
Efa nampoizina. Tafita hiatrika famaranana amin’ny fiadiana ny lalaon’ny Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI), eo amin’ny taranja handball zazalahy, i Madagasikara sy La Réunion. Ireto firenena roa ireto izany no hidona eo amin’ny famaranana, anio, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Raha ny fizotry ny manasa-dalana omaly, tsy nahatohitra an’i Madagasikara i Kaomoro. Lavontsika tamin’ny isa 27 noho 24 izy ireo tamin’izany. Niady ny fihaonana ary samy nampiseho ny fahaiza-manaony ny ekipa roa tonta. Saingy, nanatombo tany amin’ny fahaiza-miaraka teo amin’ny fanafihana sy fiarovan-tena ny ekipa nasionaly. Nahay nanararaotra ny fahaverezam-baolina sy fahadisoana nataon’ireo mpilalao kaomorianina ihany koa ny ekipam-pirenena.
Etsy andaniny, nandresy mora fotsiny an’i Mayotte kosa i La Réunion teo amin’ny manasa-dalana ilany. Lavo tamin’ny isa 38 noho 30 ry zareo Mahorais tamin’izany. Hiady ny laharana fahatelo kosa i Kaomoro sy Mayotte, anio, mialoha ny hikatrohan’i Madagasikara sy La Réunion ny famaranana. Marihina fa ny orinasa Telma no mpanohana ny hetsika sy ny ekipa nasionaly.